Deepfreeze Hack - နည်းပညာ
3/17/2013 04:49:00 PM Hack No comments
nternet ဆိုင်တွေ မှာ အုပ်အုပ်ထားတဲ. Deepfreeze တော်တော်များများကို ဒီကောင်လေးက ကောင်းစွာ ဖြုတ်ပေးနိုင်ပါတယ် version အမြင်.ဆုံးနဲ. လွယ်ကူစွာ ဖြုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်..... အရင်တစ်ခါက ကျနော် သူငယ်ချင်း ဆိုဒ်တစ်ခုမှာတော. တင်ပေးဘူးတယ် ဒါပေမဲ. virus ကိုက်သွားလို. ဖွင်.မရဖြစ်နေတယ်ဗျာ ဒီတစ်ခါတော. တကယ်ရနိုင်ပါတယ် .............